I-KDEApps1: Ukubukeka Kokuqala Okuzungeze Izicelo Zomphakathi ze-KDE | Kusuka kuLinux
I-KDEApps1: Ukubheka Okokuqala Izicelo Zomphakathi ze-KDE
Uma sikhuluma ngakho I-GNU / Linux kanye nabo Imiphakathi Yomsebenzisi noma zabo Izindawo zedeskithophu nakanjani zizohlala zivelele 2, ezingagcini nje ngokuba zinkulu kepha ezikhiqizayo ngokuya ngezicelo ezenzelwe ezethu Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile.
Eyokuqala yi- "Umphakathi we-GNOME" nomunye i "Umphakathi we-KDE". Futhi kulesi sibuyekezo sokuqala "(KDEApps1)" sizoqala ngokubheka okokuqala okukhona izinhlelo zokusebenza ezisemthethweni we "Umphakathi we-KDE", kuqala ngalabo abasemkhakheni we Ukuthuthukiswa kweSoftware.
Mayelana ne izinhlelo zokusebenza ezisemthethweni we "Umphakathi we-GNOME" sike futhi saphawula phambilini. Hhayi kuphela ngawodwana kepha eziningi zazo amaphrojekthi nezinhlelo. Ukuba ngomunye wabo, kubhekiswe kithi okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene isixhumanisi sayo esizosishiya ngokushesha ngezansi, uma kwenzeka abanye befuna ukusithinta:
"Iphrojekthi efuna ukwenza ngcono ukuthuthuka nokukhula kwezicelo nemitapo yolwazi ukukhulisa imvelo ye-GNOME Desktop Environment. Ngakho-ke, i-GNOME CIRCLE imele isoftware enhle eyenzelwe futhi etholakalela ipulatifomu ye-GNOME. Hhayi kuphela izinhlelo zokusebenza nemitapo yolwazi engcono kakhulu ye-GNOME, kepha futhi ifuna ukuxhasa onjiniyela abazimele besebenzisa ubuchwepheshe be-GNOME." I-GNOME CIRCLE: Iphrojekthi Yezicelo Nemitapo Yezincwadi ye-GNOME
Ngemininingwane eyengeziwe futhi ewusizo ku- Ubuchwepheshe busetshenzisiwe ngu- "Umphakathi we-GNOME" okulandelayo kungahlolwa isixhumanisi. Noma ukube bekunjalo, mayelana Imvelo ye-XFCE Desktop, Okulandelayo isixhumanisi.
1 I-KDEApps1: Izicelo Zokuthuthuka Kwesoftware
1.1 Ukuthuthukiswa - Izicelo ze-KDE (KDEApps1)
1.1.1 Izinhlelo zokusebenza eziphezulu eziyi-10
1.1.2 Ezinye izinhlelo zokusebenza ezikhona
I-KDEApps1: Izicelo Zokuthuthuka Kwesoftware
Ukuthuthukiswa - Izicelo ze-KDE (KDEApps1)
Kule ndawo ye Ukuthuthukiswa kweSoftware, lo "Umphakathi we-KDE" ithuthukiswe ngokusemthethweni Izicelo ezi-19 okuzoxoxwa ngakho kafushane bese siphawula kwabayishumi bokuqala, futhi sizokhuluma kuphela nge-10 esele:
Izinhlelo zokusebenza eziphezulu eziyi-10
ICervisia: Isixhumi esibonakalayo sesistimu yokulawula inguqulo enobungane. Kuhloselwe ukusebenzisa i-CVS kanye nezinye izinhlelo zohlelo lokulawula inguqulo kusetshenziswa isikhombimsebenzisi esihlanganisiwe, ukuhlinzeka ngokuxazululwa kwezingxabano, ababukeli bomlando nokwehluka, isimo samafayela wamakhophi asebenzayo, kanye nokwenziwa kwemisebenzi eminingi yokulawulwa kwenguqulo.
Uyahlanya: I-clang compiler plugin ekhipha izexwayiso ezihlobene nemikhuba emihle ye-Qt.
Isihlukanisi se-ELF: Umhloli osebenzisekayo we-ELF kanambambili, ikakhulukazi lapho udinga ukwenza imisebenzi efana nokuhlola ukuncika emuva naphambili kumtapo wezincwadi nezimpawu, ukuhlaziywa kokusebenza kosayizi wefayela le-ELF, nokuningi.
Igalari yeKirigamiUmhloli wezinto zokuqhafaza weKirigami, okuwuhlaka lwe-KDE olwakhelwe ukudala izinhlelo zokusebenza eziguqukayo, okungukuthi, izinhlelo zokusebenza isikhombimsebenzisi esingashintshwa ukuze sithinte nezindawo zedeskithophu.
I-Heaptrack: Insiza yeSoftware elandelela konke ukwabiwa kwememori iphinde ichaze le micimbi ngokulandelwa kwesitaki ukuze ukwazi ukusebenzisa amathuluzi azinikele akuvumela ukuthi uhumushe ukuhlaziywa kwememori kokugcinwa kwamahhala.
I-KAppTemplate: Uhlelo oluwusizo lokuqala ukukhula ngokushesha usebenzisa izifanekiso ezikhona ezihlinzeka ngekhodi eyisisekelo evame ukubhalwa kaninginingi nesakhiwo esifanele.
I-KCachegrindIthuluzi lokubona idatha yokuhlaziywa kokusebenza okusetshenziselwa ukunquma izingxenye ezidla isikhathi sohlelo ngesikhathi sokwenziwa.
KDebugSettings (Izintandokazi ze-KDebug): Ikuvumela ukuthi ukhethe isigaba se-QLoggingCategory esiboniswayo. I-QLoggingCategory ibonisa imilayezo evela kuzinhlelo zokusebenza kukhonsoli.
I-Kdesrc-buildIthuluzi elikuvumela ukuthi uhlanganise kalula i-KDE kusuka kumakhosombe ekhodi yomthombo wakho.
KdesvnIklayenti le-Subversion elisebenzisa i-API yokuthuthukiswa kwe-Subversion yendabuko esikhundleni sokuhlaziya nje ukukhishwa kwethuluzi kulayini womyalo, njengoba kwenza amaklayenti amaningi.
Ezinye izinhlelo zokusebenza ezikhona
Ezinye izinhlelo zokusebenza zithuthukisiwe kulo mkhakha we Ukuthuthukiswa kweSoftware ngu "Umphakathi we-KDE" Yilezi:
I-KDevelop: Imvelo yentuthuko ehlanganisiwe
I-KDiff3: Isikhombisi se-diff / patch
I-KImageMapEditor: Isihleli semephu ye-HTML
UKompareIsixhumi esibonakalayo se-Diff / Patch
KUIViewer: Isibukeli sefayela se-Qt Designer UI
Kwenziwe kwaba okwasendaweni: Uhlelo lokuhumusha olusizwa ngekhompyutha
IMassif-IsibonisiIsixhumi esibonakalayo se-Analyzer
Izinhlelo zangaphakathi ze-OSM ze-KDE: Izinhlelo zangaphakathi ze-OSM
Isambulela: UML Modeler
"Sebenzisa isoftware ye-KDE ukusesha iwebhu, hlala uxhumene nozakwenu, abangani, nomndeni, uphathe amafayela akho, uthokozele umculo namavidiyo, futhi ube nobuciko futhi ukhiqize emsebenzini. Umphakathi we-KDE uthuthukisa futhi ugcine izinhlelo ezingaphezu kwezingu-200 ezisebenza kunoma iyiphi ideskithophu ye-Linux, futhi kaningi kwamanye amapulatifomu." Izicelo ze-KDE: Inamandla, i-Cross-platform, kanye nawo wonke umuntu
Ngokufingqa, mayelana nalokhu kubuyekezwa kokuqala "(KDEApps1)" yazo zonke ezikhona izinhlelo zokusebenza ezisemthethweni we "Umphakathi we-KDE", lapho sikhulume khona ngokukhethekile futhi sazisa labo abasemkhakheni we Ukuthuthukiswa kweSoftware, sethemba ukuthi izosiza ukukwazisa okuthe xaxa ngokuqinile nangendlela enhle isoftware yamathuluzi muhle futhi usebenza kanzima Umphakathi weLinuxera isinikeza.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-KDEApps1: Ukubheka Okokuqala Izicelo Zomphakathi ze-KDE
Kuyathakazelisa kakhulu, ngiyabonga kakhulu!
Sanibonani, Alain. Ngiyabonga ngokuphawula kwakho, kuhlale kuyintokozo ukubika izinto ezibalulekile eMphakathini.
I-EdgeX 2.0 ifika nokuthuthuka kusixhumi esibonakalayo, i-API, izinsizakalo ezintsha nokuningi